DHUKKUBA TETAANASII (Dr.Guutaa Gurmeessaatiin)-Maalummaa, mallattoofi haala ittisasaa!-Waliif daddabarsaa, wal dubbisiisaa, fayyaa walii eegaa!! – Beekan Guluma Erena
DHUKKUBA TETAANASII (Dr.Guutaa Gurmeessaatiin)-Maalummaa, mallattoofi haala ittisasaa!-Waliif daddabarsaa, wal dubbisiisaa, fayyaa walii eegaa!!	Beekan Erena
HEALTH July 7, 2016July 7, 2016OROMO
108SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
DHUKKUBA TETAANASII (Dr.Guutaa Gurmeessaatiin)
Dhukkubni tetaanasii baakteeriyaa kiloostiridiyeem tetaanii kan jedhamuun dhibee dhufu dha. Namoota saalaan ykn umriidhaan hin daangessu, daa’ima reefu dhalattu irraa kaasee hanga jaarsaa fi jaartiitti qabuu danda’a. Dhibeen kun narvoota maashaalee qaama keenya ajajan kan miidhuu fi maashaaleen keenya akka garmalee kottoonfatan kan godhuu dha. Maashaaleen keenya yoo garmalee kottoonfatan socho’uu, harganuu, nyaata liqimsuu fi kkf ni dhorku/hanqisu.
Baakteeriyaan dhibee kana fidu addunyaa mara irratti kan argamu yoo ta’u, yeroo hedduu biyyee, dhoqqee loowwanii fi darbee darbee bobbaa namaa keessatti argama. Baakteeriyaan kuni haala ykn naannoo tokko tokko keessatti waggootaaf jiraachuu danda’a. Gosni baakteeriyaa kanaa jiraachuuf oksijinii hin barbaadu.
Dhibeen Tetaanasii yeroo hedduu namoota talaallii dhibeef kanaaf kennamu kan hin fudhatiin irratti mul’ata. Haa ta’uutii garuu namoota talaallii dhibee kanaa guutummaan hin fudhanne irrattis ni mul’ata. Biyyoota guddatan keessatti sababa talaalliin dhibee kanaa seeraan kennamuuf ykn kennamaa tureef dhibeen tetaanasii akkaan hir’ateera. Fkn: biyya Ameerikaa keessatti bara 2001 hanga 2008 tti namootni dhibee kanaan qabaman 233 qofa turan. Sababa yaaliin olaanaan biyya sanatti kennamuu danda’uuf carraan fayyuu namoota kanaa kan biyya keenyaarra olaanaa dha. Biyya keenyatti qorannoon ifa gochuu baatus dhukkubsattoonni Tetaanasii akkaan hedduu dha. Namootni yaalii osoo hin argatiin dhibee kanaan lubbuun isaanii darbus tokko lama miti.
Wantootni dhibee kanaaf nama saaxilan:
– madaa waan qara qabuun uumame,
– infeekshinii baakteeriyaa kan biraan uumame,
– tishuu dhiiga ykn soorata gahaa dhabuun du’aa jiru …..
Haalli dhibeen kun itti dhufu:
Baakteeriyaan dhibee kana fidu yoo gogaa banaa jiru wajjin walquunname dha. Bakka madaan jiru faa dha. Madaa yoo jennu waan balaatiin (trauma) dhufe, waan balaa ibiddaan (burn) ,waan ciniinnaa bineensaa ykn ciniinnaa namaan uumame ta’uu danda’a.
Yeroo da’umsaa daa’imni yoo meeshaa qulqullina hin qabneen handhuuramtu baakteeriyaan dhibee Tetaanasii fidu karaa hidha handhuuraa seenuun daa’imni sun akka dhibee kanaan qabamtu godha (Neonatal Tetanus). Inni kun biyyoota guddatan keessatti hin mul’atu.
Bakki madaa sanaa ykn bakki baakteeriyaan sun itti qaama seenu turtii dhibeen sun itti mul’atu murteessa. Turtii dhibeen kun itti mul’atu kan murteessu fageenya bakki madaa sanaa sammuu irraa qabu dha. Fkn : yoo bakki madaa sanaa gara sammuutti dhihaate dhibeen sun dafee mul’ata, yoo makki madaa sanaa mataa ykn sammuu irraa fagaate dhibeen sun dafee hin mul’atu. Madaan yeroo baay’ee miilarratti uumama, mismaarri ykn wanti qara qabu yeroo baay’ee miilla argata. Namootni keenyas miilla qullaas waan deemaniif yeroo baay’ee madaa miilaaf saaxilamu. Akkuman armaan olitti ibsuuf yaale, bakki madaa miilarra yoo ta’u dhibeen sun turtii booda mul’ata jechuu dha. Madaa sanayyuu irraanfachuu ykn dagachuu malu Bakki madaa ykn bakki baakteeriyaan seene fuularra yoo ta’e immoo nama sanarratti dhibeen Tetaanasii turtii torban tokkoo gaditti ykn dafee mul’ata.
Wanti kanarraa adda ta’u, dhukkubsattoonni dhibee kanaa kan dhibbeentaa 15 hanga 25 ta’an madaa yeroo dhihoo ofirraa qabaachuu dhiisuu isaaniiti. Madaan biyyeetiin faalamee fi madaan sibiilota danda’aniin uumame immoo akkaan balaafamaa dha.
Mallattoolee dhibee Tetaanasii:
– afaan ykn madabii ilkaanii gargar banuu dadhabuu (trismus or lock jaw)
– nyaata liqimsuu dadhabuu (dysphagia)
– maashaan fuulaa garmalee kottoonfachuu irraa kan ka’e ilkaan dhokfachuu dadhabuu
– maashaaleen mormaa,gateettii fi dugdaa garmalee kottoonfachuu ykn goguu
– duubatti cillaakfachuu ykn keessatti goophachuu (arched back)
– qaamni darbee darbee walitti bubbutamuu; innis yeroo namni sun socho’u itti cima.
– bakka maashaan qaama walitti bututti dhukkubbiin dhagahamuu….
Dhibeen Tetaanasii bakka murtaa’aa qofa, mormaa ol qofa akkasumas guutummaa qaamaa dhuunfachuu danda’a.
Sababaa hin beekamneen dhibeen Tetaanasii yeroo sochii, bakka sagaleen ykn wacni jiruttii fi bakka ifni jirutti cimina horata. Kanaafi egaa dhukkubsattoonni akkasii bakka dukkanaa fi calleensa qabu akka ciisan kan godhamuuf.
Dhibeen Tetaanasii gaggabdoo ykn of wallaalchisuu hin fidu. Dhukkubsataan Tetaanasii of beeka jechuu dha. Harkii fi miillis yeroo baay’ee nagaa dha. Sababni isaas summiin baakteeriyaa dhibee kana fiduu gara sammuu seenuu waan hin dandeenyeef.
Ittisa dhibee Tetaanasii:
– Kophee godhachuun balaa miilla keenyarra gahu hir’isuu
– yoo qaamni keenya madaahe, yoo sibiilotni daanda’an nu waraanaan mana yaalaa deemuu
– wayita hordoffii ulfaa talaallii dhibee Tetaanasii fudhachuu
– Ijoollee seeraan talaalchisuu
– manatti ykn bakka qulqullina hin qabnetti dahuu dhiisuu – daa’imni dhalatu/ttu dhibee Tetaanasiif akka hin saaxilamne (Neonatal Tetanus).
– yoo mallattoon dhibee Tetaanasii mul’ate dafanii mana yaalaa ykn bakka yaaliin dhibee kanaa itti kennamuu danda’u deemuu.
Guta Gurmessa (MD)
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa108SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← SEENAA AJAA’IBA ADDUNYAA BARUMSAA KEESSATTI HAALA HIN BARAMNEEN DA’IMA 10’niin HOJJETAME!-Temesgen Atnafu Mulatu
“BORU IIDA!” – ASOOSAMA GABAABAA (Seenaa ijoollummaa irratti kan hundaa’e) == Kutaa 2ffaa === Barreessaan: Saphaloo Kadiir | Abdulbasit “BUQQEE TIYYA..!” →